Plọ ahịa gị ntụpọ: A na-ere ahịa ngwa ahịa eji arụ ọrụ maka ndị ahịa | Martech Zone
Thursday, July 24, 2014 Wednesday, July 23, 2014 Douglas Karr
Mobile ụgwọ ọrụ, mobile amụọ, mobile Kupọns, ozi ịntanetị… niile ndị a ngwa ọdịnala nwere otu atụmatụ jikọrọ. Ha niile bụ ihe ntinye ngwa ngwa nke na - eme ka onye na - azụ ahịa jiri nkwalite a na - akwagide ha. Nke ahụ dị mma nye ụfọdụ ndị na - azụ ahịa, mana ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na - achọ iji uru azụmahịa eme ihe mgbe ha dị njikere. Nke ahụ bụ echiche dị n'azụ Plọ ahịa gị Abù.
Enwere m ekele maka atụmatụ dị na ngwa a n'ihi na ọ na-enye onye ọrụ ike karịa ikpo okwu ma ọ bụ onye ahịa ahụ. Onye n'ji ahia ahu nwere ike ikpo ya na nke ndi ahia nke ha choro isoro, ma ha choro ma obu mgbe ha choro inweta onyinye. Kachasị mma - ọ dịghị mkpa ibipụta Kupọns, gosipụta ndepụta ego ekwentị na ndenye ọpụpụ.
Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa karịa ụtụ ahịa ha na-enweta. Ebe ọ bụ na azụmahịa gị na-abanye na ngwa ahịa Sholọ Ahịa gị, ịkwesighi ịnwa ịkwọ ndị ọrụ ibudata ngwa gị. Nke ahụ pụtara na ị nwere ohere ịnweta ụlọ ahịa ụlọ ahịa gị ọ bụla Spot ọ bụghị naanị ndị folks ị na-asọ ka ị debanye aha. Ebili mmiri na-ebuli ụgbọ mmiri niile! Ndị na-azụ ahịa na-ebudata ya Zụọ ngwa ahịa ekwentị gị na ha nwere ohere niile ha mmasị retail ebe na amụọ na ha na-enye.
Ndị ahịa nwere ike ijikwa ngwongwo ha nke azụmahịa, nye ha oge, ma kesaa azụmahịa ọhụrụ ozugbo enweghị mkpa maka nnabata ma ọ bụ ndezi dịka nyiwe ndị ọzọ chọrọ. Nakwa, ndị ahịa nwere ike soro ha niile nchịkọta nke na-etinye data na mmasị na mgbapụta. Y’oburu n’inwe ahia ma choo iwere shop the Spot gi n’ahia nlere - tinye ebe a.
Tags: amụọdabere na ọnọdụnkewamobile ngwaKupọns ekwentịmobile azụmahịamobile na-enyenso nsoịzụ ahịa gị ntụpọ
Ọnọdụ: Nkwado Ngwaahịa Dị Mkpa na Ọdịnaya